Love Island စတားအယ်လီဘရောင်းနှင့် ဂျက်ဂရဲလ်လစ်ရှ် ကြိတ်ပုန်းခုန်နေသလား? – Play Maker Sports Journal
Love Island စတားအယ်လီဘရောင်းနှင့် ဂျက်ဂရဲလ်လစ်ရှ် ကြိတ်ပုန်းခုန်နေသလား?
အင်္ဂလန်နှင့်မန်စီးတီးစတားဂျက်ဂရဲလ်လစ်ရှ်ဟာမန်စီးတီးအတွက်ပထမဆုံးဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် Love Island စတားအယ်လီဘရောင်းအပါအဝင်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပါတီပွဲလုပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဂျက်နဲ့အယ်လီဘရောင်းတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သူတစ်ဦးက “သောက်လိုက်ကြတာဗျာ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြည်ကြည်နူးနူးပဲ။ပြီးတော့သူငယ်ချင်းအချို့နဲ့အပြင်ထွက်ပြီးစကားပြောတာလည်းတွေ့ရတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့ဂျက်ကရီယက်မရာ့ဇ်၊ဒန်နီဆမ်ဆင်အပါအဝင်ဘောလုံးသမားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chinawhite သို့ထွက်သွားကြတယ်။အဲဒီမှာလည်းအယ်လီဘရောင်းနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်”လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဂျက်ဂရဲလ်လစ်ရှ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက Celeb Dating App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Raya မှာအကောင့်ဖွင့်လိုက်မှုနဲ့အတူအင်္ဂလန်စတားနှင့်ဆာရှာအတ်ဝုဒ်တို့အကြားအဖုအထစ်များရှိနေပြီလားလို့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေပါတယ်။
Love Island စတားအယ္လီဘေရာင္းႏွင့္ ဂ်က္ဂရဲလ္လစ္ရွ္ ႀကိတ္ပုန္းခုန္ေနသလား?
အဂၤလန္ႏွင့္မန္စီးတီးစတားဂ်က္ဂရဲလ္လစ္ရွ္ဟာမန္စီးတီးအတြက္ပထမဆုံးဂိုးကိုသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Love Island စတားအယ္လီဘေရာင္းအပါအဝင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ပါတီပြဲလုပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ဂ်က္နဲ႔အယ္လီဘေရာင္းတို႔ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သူတစ္ဦးက “ေသာက္လိုက္ၾကတာဗ်ာ။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးပဲ။ၿပီးေတာ့သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕နဲ႔အျပင္ထြက္ၿပီးစကားေျပာတာလည္းေတြ႕ရတယ္။ညေနပိုင္းေရာက္ေတာ့ဂ်က္ကရီယက္မရာ့ဇ္၊ဒန္နီဆမ္ဆင္အပါအဝင္ေဘာလုံးသမားသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ Chinawhite သို႔ထြက္သြားၾကတယ္။အဲဒီမွာလည္းအယ္လီဘေရာင္းနဲ႔သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြရွိတယ္”လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ဂ်က္ဂရဲလ္လစ္ရွ္ဟာၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္တုန္းက Celeb Dating App တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Raya မွာအေကာင့္ဖြင့္လိုက္မႈနဲ႔အတူအဂၤလန္စတားႏွင့္ဆာရွာအတ္ဝုဒ္တို႔အၾကားအဖုအထစ္မ်ားရွိေနၿပီလားလို႔ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနပါတယ္။